Dhacdoyinka Lagu Xasuusto Sanadkii 2012(Sawiro)- calanka.com
Dhacdoyinka Lagu Xasuusto Sanadkii 2012(Sawiro)
(Calanka.com) - Posted at 01/01/2013 By Saadaq
Marka ugu horeysa waxaan leenahay Akhristayaasheena shafarfta leh sanad wacan oo wanaagsan meel kasta oo caalamka aad kaga sugan tihiin,waxaana mar walba u taaganahay in aan ka haqab tirno dhacdoyinka caalamka ka dhaca ma kuwa hareerhaga ka dhacaya.
Calanka waa u adeegaha shacabka soomaliyeed,waxaana u balanqaadi doonaa sanadkan cusub in aan ka dhargin doono wararka iyo faaloyinkooda,iyadoona mar walba ay jiraan akhristayaal nala soo xiriira oo nagu bogaadiya horumarka aan ka wadno warbaahinta.
hadii aynu soo noqo sanadkii 2012 waxaa uu ahaa mid faraxad iyo murugo is dabataal ku reebay shacabka soomaaliyeed waxaana ka mid ah waxyaaba isbadala muuqda ee sanadkaasi la gaadhay in la helay dawlada soomaaliyeed oo ka baxda KMG,sidoo kale isla sanadkii 2012 waxaa magalada muqdisho markii ugu horeysay lagu qabtay doorashada Baarlamanka midda madaxweyanaha,Magalada Muqdisho waxaa 2012 yimid ergo ka socta dhamaan gobolada dalka soomaliya kuwaasi oo ansixiyay dastuurka dalka uu yalan doono Ergadani oo kor u dhaaftay 825.
Horumararada kale ee dalka ka dhacay waxaa ka mid ahaa in doorashada gudoomiyaha baarlamanka soomaliya loo dhigay hab waafaqsan nidaamyada ka jira caalamka,waxaana doortay baarlamaan ka duwan kii hore oo tiro ahaan waxaana baarlamanka cusub ee somaliya laga dhigay mid wada aqoon yahano ah,kuwaasi oo diyar u ah bad'baadinta dalka iyo diinta,iyagoo taasi ka duulaya ayaa waxaa ay u doorteen gudoon Maxmed Cismaan Jawaari oo ah aqooyahan ka yimid dalka dibadiisa,waxana uu codad kaga helay Cali Qaliif oo ahaan jiray Ra'iisalwasaare soo maray somaliya.
Baarlamankaasi ayaa waxaa ay doorasho u sameyeen 25-Musharax oo u taagnaa madaxweynenimada dalka soomaliya,waxaana loolanka kama danbeyska ah iskugu soo hadhay sheekh Shariif sheekh iyo xasan sheekh Maxmuud oo iyadoona uu cod ku qaaday xasan sheekh maxmuud Madaxweyanaha somaliya,waxaana si aan horey loo arag Hambaliyo isku siiyay labada masuul,xil wareejin aan horey loo arag ayaa ka dhacday xarunta madaxtoyada somaliya,waxaana arintani ay saameyn weyn ku yeelatay wadamo badan oo africa ah oo la yaabay habka dimuqraadiyada ee somaliya.
Arimaha Murugadda leh ee dalka ka dhacay 2012.
Abriil waxaa qarax xoogan uu ka dhacay xarunta tiyaatarka qaranka,halkaasi oo ay ku sugnaayen madax,fanaaniin wariyeyaal iyo bahada isbooriga waxaana fal qarax ah oo halkaasi ka dhacay ku geeriyooday halyeeyo Isboortis,wariyeyaal iyo dad shacab ah oo u joogay furtaanka xarunta madadaalada qaranka ee National Tiyaartar.
Halka qaraxa ka dhacay waxaa ku sugnaa R/wasaarihii hore ee somaliya Cabdiwali Gaas iyo xubno ka tirsan dawladiisa waxaana taasi ay shaki ka dhex abuurtay laama dawlada waxaana markii danbe si cad u sheegtay qaraxaasi xarakada Alshabab oo ka dagaalameysay xiligaasi magaalda Muqdisho.
Qarax ismiidamin ah ayaa ka dhacay Dhuusamareeb isla 2012 waxaana lagu weeraray xubno ka tirsan Ahlu-suna xildhibaano baarlamanka soomaliya ka tirsanaa iyo sidoo kale dad shacab ah,qaraxani oo ahaa mid gilgilay dhamaan magalada dhuusamareeb ayaa waxa horey loo arag mid noociisa ah,saraakiisha Ahlu-suna ayaa waxaa ay dhabar u saareen Al-shabaab oo marar badan sheegtay qaraxyada ka dhaca dalka.
Qaraxyada ka dhayay dalka ee lagu dhibaateyay dadka shacabka ah kuma koobneen dhinaca dawladii KMG ahayd ee xiligaasi jirtay,waxaana sidoo kale qarax murugo reebay lagu qaaday xarun ay ku kulmaan wariyeyaasha Muqdisho gaar ahaana guriga Hooyooyinka ee magalada muqdisho bishii Sebtenbar halkaasi oo ay ku geeriyoodeen 30-ruux oo wariyeyaal u badan.
Markiiba waxaa qaraxyadaasi sheegtay xarakada al-shabaab oo ku tilmaamay in uu ahaa mid ay ku beegsadeen dad qaldamay sida Hadalka ay u dhigeen,waxaana arintani ay murugo ku reebtay ehelada 30-ruux ee halkaasi ku geeriyooday iyo dhamaan shacabka soomaliyeed.
Somaliya Iyo Somaliland Oo Kulmay
Waxaa markii ugu horeysay kulmay Madax ka kala socota somaliya iyo somaliland,waxaana arintani ay lahayd xiiso gaadh ah,kaasi oo ka dhashay ka dib markii shir balaaran somaliya loogu qabtay magalada Londan waxaana garwaden ka ahaa dawlada ingiriiska,waxyaabaha shirkaasi ka soo baxay ayaa waxaa ka mid ahaa in wadahadal furtaan somaliya iyo somaliland.
Shir balaaran ayaa Muddo ka dib ka dhacay isla magalada Dubai halkaasi oo ay kulmeen sheekh Shariif sheekh iyo Axmed maxmed siilaanyo,waxaana kulankaasi u muuqday mid aan wax badan looga hadlin balse labada dhinaca ayaa ku balamay wafdi wasiiro ah in ay kulmaan muddo ka dib kaasi oo kulankoodi ku qabsoomay magalada Londan.
Qodobadda ka soo baxay shirarkana yaa waxaa ay ahaayen kuwo aan macno weyn ku fadhiyin waxaana badi xooga la saaray in laga hortago burcad badeeda iyo in kulamada labada dhinac ah labadiyo taasi oo aan macno weyn ugu fadhiyin dhinacyada kulmay oo looga fadhiyay wax ka weyn arimaha ay ka shireen.
Hadaba sanadkan cusub ee 2013 ayaa waxaa ku bilowmay jawi wanaagsan oo soomalida dhamaanteed rajo weyn ka muujinayaan dawladooda cusub ee haatan bilatay,waxaana jira dad badan oo ku taliyay in dalka dib loogu laabto wax laga qabsado,magalada Muqdisho ayaan ahayn muqdishadii hore waxaana ka muuqda Horumaro badan oo ay sameysay Muddadii dawladaha KMG ay jireen hadan ay ka sii horumareyso.